विचार/दृष्टिकोण Global News Nepal
पत्रकारीताको सिलसिलामा सुरुमा निकै कष्ट र चुनौती थियो ।
१८ घण्टा पछि राति कल्पनाको दुःखद नि’धन भयो ।
शिवरात्री, देशका विभिन्न स्थानमा अवस्थित शिवालयहरुमा दर्शनार्थीहरुको घुइचो लाग्ने गर्दछ।
चासोक तन्गनाम उधौली : बिशेश गरेर किरातजातिहरुले मनाउने पर्ब हो यो पर्बलाइ लिम्बुजातिले चासोक तङनामको नामले मनाउने गर्दछ ।
प्रबिधिको प्रयोग गरि युटुब र साउन्ड सिस्टमको भरमा देउसिभैलो खेलि हाम्रो मौलिक सस्कार सस्कृतिलाई पुरै बिर्सिएको। देउसिभैलो टोली निकाल्नलाइ कुनै कसरत वा मेहेनेत नै गर्नु नपर्ने।
क्रान्ति शब्द सुन्दैमा पनि मष्टिक्समा एक किसिमको तरङ्ग आउँछ । क्रान्ति शब्दलाई बुझ्दा र ब्याख्या मात्र गर्दा पनि परिबर्तनको सम्बाहकको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । आज सम्म संसारमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका क्रान्तिहरु भएर तिनीहरुले दिनु पर्ने रिजल्ट(परिवर्तन) दिएको सुनेको छु ।
२१ औ शताब्दीमा आइ पुग्दा मानव समाज अझै पनि लिङगको आधारमा भेदभाब मुक्त भएको छैन । मार्च ८ को दिन विश्वभर नारी दिबस मनाइन्छ ।
तिस बर्ष अगाडी टुरिस्ट भिष्सामा अमेरिका आएकी रेसम गुरुङले त्यो बेला भोगेका दुख उन लाई मात्र थाहा छ । नयाँ परिबेश नयाँ भाषा सस्कृती धेरै अफ्ठ्यारो थियो ।
विश्वका आदिवासी जनजातिहरुले आफनो आधारभुत तथा मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि सम्वन्धित राज्यसँग विभिन्न काल खण्डमा लड्दै आएको त्यो लडाइ आज पनि जारी रहेको तथा अधिकार प्राप्ति नभए सम्म जारी रहनेछ ।
" तेरो अनुहार नै 'प्रकाण्ड' टाइपको छ । तँलाई कसरी बिश्वास गर्नु मूला!"-धमला इन सर्च अफ कंग्रेस
कुनै काम नभएको बेला केवल काम हुँदैन । नत्र त के हुँदैन ?! सबचिज हुन्छ । सकसक हुन्छ । खसखस हुन्छ । चकचक हुन्छ । बकबक हुन्छ । कहाँ-कहाँ , के के मात्र चिलाउँदैन?! ढाड, कपाल, दाह्री, नाक, कान र कहिलेकाही त नङ समेत चिलाउँछ । रौंहरूले यही मौका छोप्छन् । मनको के कुरा! यस्तोबेला मनलाई लूतो आउँछ ।
आरनमै बित्यो जीवन
धुलाम्ये सडक छेउको सानो झुपडी । खरको छानाभित्र असरल्ल छरिएका फलामका टुक्राहरु । थोत्रो प्लास्टिकमा पोको पारिएको कोइला । कोइला पोल्न प्रयोग गरिने भत्किएको चुलो ।
कोरिया को जाडो सिजनमा बेरोजगारको समस्या बढी
बाग्लुङका बबिन थापा ६ महिना अगाडी कृषि भिजामा रोजगारको लागी कोरिया आएका थिए। उनि खाङ्गवन्दोमा रहेको कृर्षि फार्ममा काम गर्थे। उनको फार्ममा स्टाबेरी उत्पादन हुन्छ। नोवेम्बर देखि जाडो सुरु भयो।
गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने कि
विश्वका राष्ट्रहरूको नीति, नियम, कानुन र निर्देशन आफ्नो राष्ट्र अनुकूल अवश्य नै हुने बनाउने गर्छन् । विदेशीले आफ्नो देशको भौगोलिकता र समय सापेक्षता अनुरूप तयार पारेको शिक्षा नीति, प्रणाली सबै देश र स्थानका लागि अनुकूल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
कोरियन सोजु सँग अन्तरङ कुराकानी
शुक्रबारको दिन कम्पनिमा काम अलि चाडै सकिन्छ । शनिबार र आइतवार कामबाट बिदा हुने हाम्रो कम्पनि स्कुल पढ्दाको शुक्रबार हाफ छुट्टी भएर कुदेर घरको आमाले बनाएर राखेको अर्नी खान पुग्दा जस्तो गरी होस्टल पुग्ने गर्दछु...
यो विषय धेरै चर्चा नभएको विषय हो । विकासको कुरा त हामी धरैले सुन्ने गरेका छौँ तर, कताकता उन्नतिका कुराचाहिँ हरायो । धरणीधर कोईरालाले राणाशासनकालमै लेखेको कवितालाई बीपी कोइराला बारबार उदृत गर्नुहुन्थ्यो...
मार्क्स र उनकी पत्नीबीच यस्तो थियो प्रेमसम्बन्ध
साम्यवादका प्रवर्तक तथा महान दार्शनिक कार्ल माक्र्सकी जीवनसङ्गीनी जेनी वोन वेस्टाफालेनको जन्म जर्मनीको राइन प्रान्तको सल्ज्वेडलको एक सभ्रान्त परिवारमा १२ फेब्रुवरी, १८१४ मा भएको थियो । जेनीको जन्मपछि उनको परिवार ट्रिरमा सरुवा भयो ...
सनातन दर्शनको गरिमा
विश्वलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपाली कला, सँस्कार र सांस्कृतिक विश्व जगतका लागि लोकप्रिय रहेका छन् । संस्कार संस्कृतिमा नेपाल विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र हो । पूर्वीय सनातन दर्शन अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने क्रम बढिरहेको छ ...